Deeqaha Waxbarashada Qayb ma ka Heshaa Qomiyada Somalida Ethiopia? – Rasaasa News
Feb 3, 2012 Deeqaha Waxbarashada Qayb ma ka Heshaa Qomiyada Somalida Ethiopia?
Ethiopia waa dal weyn oo kulmiya qoomiyado badan oo ku hadla 72 af, lehna dhaqamo, dhaqan, cimilo iyo joqoraafi aad u kala durugsan, laakiin waxay leeyihiin hal dawlada oo baahidooda kala duwan farsamo wax ugu qaybisa, kuwa sheegta.
Waxaa dalka haatan ka jira 9 dawlad degaan [states] iyo labo maamul magaalo [councils] oo kuligood isku mid u hoos taga dawlada dhexe.
Dhamaan maamuladaas waxaa ka jira adeegyada ay u baahan yihiin dadweynuhu, in kasta oo ay ku kala horeeyaan. Maamulada qaar bay ka jiraan adeegyo dhamaystiran qaarna waa bilow oo adeeg quman kama jiro.
Kala horaynta adeegyada maamulada waxaa loo aaneeyaa dawlahihii hore iyo dagaalo joogta ah oo ka jiray degaanada qaarkood, in kasta oo kuwa aad u dibu dhacsanaa ay haatan ka mid yihiin kuwa ugu fiican.
Degaanka Somalida Ethiopia, waxaa uu ka mid yahay 9 -ka dawlad degaan ee ka jira Ethiopia, wuxuuna wataa lambarka 5aad. Degaaka Somalida waxaa dib u dhigay, colaad iyo hagar ka timid dawladihii hore ee Ethiopia.
Dhinac walba oo laga eego, degaanka Somalidu wuu ka dambeeyaa degaanada Ethiopia, wax qabad dawlo oo dhab ah wuxuu ka bilowday degaanka Somalida 2010, ka dib heshiiskii dhexmaray Jabhadaha iyo dawlada.
Saddexda cadow ee aadmiga gaajada, cudurka iyo jahligu way ka jiraan degaanka Somalida. Cadowga kowaad ee wax walba oo xuna ka dhasho waa aqoon la,aanta, taas oo si baahsan uga jirta degaanka Somalida Ethiopia, iyada oo aan wax laga qabana iskuday kasta oo horumar lagu raadiyo waa hal bacaad lagu lisay.
Abaal waxaa leh dawlada haatan ka jirta Ethiopia oo isku dayeysa in ay wax ka qabato dhibaatooyinka baahsan iyo baahida adeega dadweynaha.
Degaanka Somalida waxaa ka furan iskuulo badan, in kasta oo ayna dabooli karin baahida waxbarashada ee ka jirta degaanka Somalida Ethiopia, oo isagu hore uga hadhay degaanada Ethiopia.
Haatan, waxaa ka furan xarunta degaanka Somalida Jijiga, Iskuulo bixiya wabarsho ka saraysa heerka dugsiga sare oo isugu jira dhawr nooc oo aan wali la manfacsan dhalinyarada ka baxday.
Waxaa adag in aad ku aragto hawlwadeenada safka hore ee adeega dadweynaha dhalinyaro u dhalatay degaanka Somalida oo ka shaqaynaysa hawlaha u baahan xirfadaha takhasuuska. Arintaas waxaa ugu wacan iyada oo ayna qoomiyada Somalidu helin fursado waxbarsho dibadeed iyo mida dalka gudihiisa ah ee muhiimka ah.
Waxaa aad u yar noocyada xirfadaha injineeriyada, aqoonyahano beereed, xisaabiyaayaal hanan kara hawlaha xisaabaha si looga hortago musuqa, dhakhaatiir leh takhasusuyo kala duwan, macalimiin hanan karata heerarka tacliinta kala duwan iyo waliba xirfadleyaal ku filaan kara heerarka xirfadaha loo baahan yahay.
Tusaale, waxaa aad u kala fog heerka waxbarshada ka jira degaanka Somalida iyo heerka waxbarshada ka jirta degaanada Axmaarada, Tigray, Oromo Iwm.
Tacliintu waxay ka mid tahay waaxyaha ayna dawlada dhexe fara galinin marka la eego xeerka dawlad wadaaga Ethiopia, wax ka qabashadeedana waxaa leh dawlada degaanka.
Arimaha kordhinta tayada waxbarashada waxaa ka mid ah; helida buuggaag ku filan oo ay akhristaan ardaydu, macalimiin leh tayo waxbarsho, tababar joogta ah iyo deeq waxbarasho oo dhiir galin karta ardayda.
Sanad walba dalka Ethiopia, waxaa deeqo waxbarsho hela arday aad u badan oo kala aada aduunka oo dhan iyaga oo baranaya maadooyin kala duwan. Waa muhiim in deegaanku la qaybsado deeqaha waxbarsho degaanada Ethiopia, sida miisaaniyada.
Waana muhiim in arintaas deeqaha tacliintu ay noqoto mid lagu xisaabtamo, oo isbadal ku keenta sanooyinka soo socda degaanka Somalida iyo guud ahaan Ethiopia.
Sanadka 2012 waxay Ethiopia qayb ahaan deeq waxbarsho ka heshay dalalka; Australia, Hong Kong, China, India, Japan, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand iyo USA.
Hanaanka waxbarsho ee Ethiopia waa sidan;da,ada 5-10, waa 6 sano dugsi hoose iyo da,ada 11- 12 dugsi dhexe 2 sano.Da,ada 13 – 16 dugsiga sare 4 sano. Da,ada 17 -18 u diyaarinta wabarsho heer jaamacad 2 sano.
Waxaa wax aad looga naxo ah in shaqaalaha degaanka Somalidu iska daa dawlada dhexe uusan hanan karin shaqooyinka degaanka ee u baahan aqoonta.
Wasiirada degaanka Somalida ugu jira dawlada dhexe hadaa waydiiso wasaarada aad madaxda u tahay imisa Somali ah baa ka shaqeeya jawaabtu waa midna waa kaligii oo wasiir ah.
Arintan waxaa saldhig u ah ka maqnaanshaha deeqaha waxbarasho ardayda degaanka Somalida Ethiopia, haday arintaasi jiri lahayd waxaa xaqiiq ah in la heli lahaa dad shaqooyin ka hela federalka dhexdiisa.